Wararka - Waa maxay astaamaha dharka caaggu ka sameysan yahay
100% Xalka Midab Poly Fabric
Dharka Taxanaha Ubaxa
Dharka Taxanaha Caleenta
Hubi Dhar Taxane ah
Dharka Taxanaha Ubax Ham
Daboolidda Taxanaha Camouflage
Mashiinka Taxanaha Leopard
Dharka Taxanaha Kartuunka
Dufanka Taxanaha Dhibcaha
Joometri Fabric Taxanaha
Maxay yihiin astaamaha dharka polyester taffeta
Waa maxay astaamaha dharka polyester taffeta
Taffeta waxaa sidoo kale loo yaqaannaa polyester taffeta, waa dhar aad ugu badan nolosha, laakiin marka lagu daro dadka xirfadleyda ah, dadka caadiga ah fahamkiisa ma cadda, sidaa darteed waxaan u nimid inaan fahamno astaamaha polyester taffeta.
Astaamaha dharka polyester taffeta: Polyester taffeta waa dhar dhaqan kiimiko dhaqameed leh, oo leh tayo wanaagsan, waaraya oo xirta u adkeysata, raqiis ah, daryeel fudud iyo faa'iidooyin kaleba, dadku way jecel yihiin Gaar ahaan ka dib markii si qoto dheer loo farsameeyo iyo loo adeegsado habka dahaadhka, muuqaalka kore ee dusha marada si weyn ayaa loo hagaajiyay. Gaar ahaan, xariirta jilicsan ee jilicsan ayaa la qaatay. Dharka ka samaysan dharkan wuxuu leeyahay midab jilicsan iyo muuqaal soo jiidasho leh, oo ku habboon samaynta dharka caadiga ah, dharka isboortiga iyo dharka carruurta. Midabada kala duwan waxay ku dartaa soo jiidashada sasabashada. Matte polyester taffeta waa la aqbalaa muuqaalkeeda dhalaalaya iyo qiimaha hooseeya awgeed, caaga polyester-ka waxaa laga samayn karaa jaakado, dallado, gawaari, dharka isboortiga, boorsooyinka gacmaha, dahaadhka shandadaha, bacda jiifka, teendhooyinka, daahyada qubeyska, marada miiska iwm. Poly Taffeta waa nooc ka mid ah dharka fiber kiimikada caadiga ah. Waxay caan ku ahayd in muddo ah, laakiin iibku wuu hoos u dhacay markii lagu daray dalag cusub oo ah dhar samaysan. Sannadihii ugu dambeeyay, dharka caaga ah ee loo yaqaan 'polyester taffeta' oo leh xariir jilicsan, iyo astaamo cusub oo midabo leh oo suuqa ku jira. Waxay isticmaalaan dharka yar-yar ee caagga ah, oo ka jilicsan uguna soo jiidasho badan. Waxay ku habboon tahay sameynta dharka caadiga ah ee dharka isboortiga carruurta. Waxaa jira daraasiin midabyo ah, jirka kore waa mid aad moodada, oo lagu daray soo jiidashada sasabashada. Matte polyester taffeta way fududahay in la aqbalo sababtoo ah muuqaalkiisa dhalaalaya iyo qiimaha hooseeya. *** dhow, cufnaanta sare balastarka anti baffada ayaa leh soo jiidasho u gaar ah. Tamar buuxda. Waxa kale oo ay noqotay maro khafiif ah oo marada huwiya oo dadku ka raadiyaan galka caadiga ah ee caadiga ah. Its "290T ama ka badan polyester taffeta" waxaa aqbalay soo saarayaasha dharka badan. Qeexitaanka alaabtu waa 290T 300T 320T, iwm. Waxyaabaha fiilada polyester-ka ah ee ku lug leh dhammaantood waa FDY48D / 48F 50D / 48F, iwm, oo sida muuqata ka fiican sidii hore ee suuqa.
Iibinta jaakadaha hoos u dhaca awgood, diyaaradda biyaha hoos u jiida “290T + heerkulka gaarka ah *** masduulaaga” waxaa loo isticmaalaa saliid iyo muraayadaha ka dambeeya marada jaakada hoose, iyo waliba dahaadhka jaakada hoose oo leh baal ka hortag ah daahan Boodhka iyo weft-ka waxaa laga sameeyay polyester semi-blunt FDY50D / 48F iyo weave-ka saafiga ah ee maraakiibta biyaha. Waxaa loo dhexgaliyay iyada oo loo eegayo (290T ama wixii ka sareeya) qeexitaannada. Dharka ayaa jilicsan. Dhimista Alkali ee dheehida caag jilicsan iyo habab kale, sida ku cad baahiyaha macaamiisha, riixitaanka iyo qulqulka iyo habka kale ee dhameystirka qaaska ah, sheyga wuxuu leeyahay qaab isku mid ah, dhuuban oo jilicsan, dusha sare oo jilicsan, jilicsan oo aan sifooyin lahayn, kaliya ma sameyn karo dharka ragga iyo haweenka xilliga firaaqada ayaa ah dahaarka ugu habboon ee jaakad hoos u dhigta. Waxay yihiin qurux iyo jaalle, oo leh qaab casri ah. Baaxadda dharka waa 160 cm. Sababtoo ah cufnaanta sare ee F, qaabka polyester taffeta ayaa aad ugu habboon in la xidho, sidaas darteed waa mid caan ah. Sidaa darteed, dabar goynta nus-dhamaadka 48D / 48F 50D / 48F 68D / 48F ee suuqa dunta caarada ayaa aad loo jecel yahay, qiimaha dunta caagkuna wuxuu u kacay si dhexdhexaad ah.
Dhismaha Huitong, Jinhui Road, Beigan Street, Xiaoshan, Hangzhou, China